Helitaanka - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
CHSI waxay ku dadaaleysaa inay hubiso in adeegyadeeda ay heli karaan dadka naafada ah. CHSI waxay maalgashatay ilo aad u fara badan si ay gacan uga geysato hubinta in degelkeeda loo fududeeyo isticmaalkeeda isla markaana u sahlanaato dadka naafada ah, iyadoo la aaminsan yahay in qof walba uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado sharaf, sinnaan, raaxo iyo madax-bannaanida.
CHSI waxay diyaarineysaa tan Isticmaalka Widget Isticmaalka Websaydhka Isticmaalaha taas oo ay ku shaqeyneyso adeege marin u heellan. Barnaamijku wuxuu u oggolaanayaa CHSI inay hagaajiso u hoggaansamideeda Tilmaamaha Helitaanka Macluumaadka Webka (WCAG 2.1).
Meeniska marin u helka CHSI waa la awoodsiin karaa adigoo gujinaya astaanta meheradda marin u helka ee ka muuqata cidhifka midig ee bogga. Ka dib markii aad kicisay meheradda marin u helka, fadlan sug daqiiqad menu-ka marin u helka oo gebi ahaanba ku shuban.
CHSI waxay sii wadaa dadaalkeeda inay si joogto ah u wanaajiso marin u helkeeda boggooda iyo adeegyadooda iyadoo la aaminsan yahay inay tahay waajibaadkeena wadajirka ah ee xagga anshaxa ah inaan u oggolaano adeegsiga bilaa sumad la'aanta, helitaanka iyo ka hortagga sidoo kale kuwa annaga naafada ah.
In kasta oo dadaalkeenna aan ugu jirnay in aan dhammaan bogagga iyo waxyaabaha ku jira CHSI ka dhigno kuwo si buuxda loo heli karo, haddana qaar ka mid ah waxyaabaha laga yaabo in aan weli si buuxda loogu habboonayn heerarka marin-u-helista ugu adag. Tani waxay ka dhalan kartaa helitaan ama aqoonsi la'aan xalka farsamada ugu habboon.
Haddii aad dhibaato kala kulanto wax kasta oo ku saabsan CHSI ama aad u baahan tahay caawimaad qayb kasta oo ka mid ah boggeena, fadlan nala soo xiriir inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah sida hoos ku faahfaahsan waxaanan ku farxi doonnaa inaan caawinno.
Haddii aad rabto inaad ka warbixiso arrin marin u helid, aad hayso wax su'aalo ah ama aad u baahan tahay caawimaad, fadlan la xiriir CHSI sida soo socota:
Wac: (218) 236-6502 ama 1 (800) 842-8693